မစိမ်းပြာနှင့် မျက်တောင်တု – Hsu Myat Moe
ဆုမြတ်မိုး >> အလေ့ကျပေါက်သောမြက်ရိုင်းတစ်ပင်
ဘဏ်ထဲမှာရှိသောပိုက်ဆံတွေကို စိတ်ဖြင့်တဒေါက်ဒေါက်ပေသီးခေါက်လိုက်သည် ။ လစာ ၊ အိမ်လခ ၊ ဖုန်းခ ဟင်းဟင်းဟင်း.. ကုန်ကျစရိတ်တွေလည်းတယ်များသကိုး ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်အောင်ဝယ်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ မစိမ်းပြာတစ်ယောက် ခြင်းတောင်းတစ်လုံးကောက်ဆွဲပြီး အလှကုန်ပစ္စည်းတွေထားတဲ့ဘက်ကိုပဲဦးတည်လိုက်မိသည်။
အလှကုန်တန်းကို နာရီဝက်လောက်ပတ်ပြီးပေမယ့် မစိမ်းပြာလိုချင်သောပစ္စည်းတွေယခုထက်ထိရှာမတွေ့နိုင်သေး။ စင်ကာပူက ရှောပင်းစင်တာတွေမှာက ကုန်ပစ္စည်းကောင်တာတွေတစ်နေရာတည်းမှာအများကြီးရှိပေမယ့် ကောင်တာတိုင်းမှာ အရောင်းစာရေးတွေထားလေ့မရှိ ။ Watson တို့လို့ဆိုင်မျိူးမှာသာ အရောင်းစာရေးမလေးတွေအနည်းအကျဉ်းရှိတတ်သည် ။ ဒါကြောင့်မို့ မစိမ်းပြာတစ်ယောက် အလှကုန်တန်းမှာ တစ်ယောက်တည်းသွားလိုက်ပြန်လိုက်ယောက်ယက်ခတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
မျှော်နေတုန်း ကျော့ဆုံးလာ ဆိုသလိုပဲ ရှောပင်းစင်တာရဲ့ဝန်ထမ်းဝတ်စုံနဲ့လူတစ်ယောက်မစိမ်းပြာဆီကိုဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာခဲ့သည် ။
“Hello, excuse me, i want to buy fake eyelashes , where can i get it??”
“imm ohh..wo bu zhi doa…. wo wo ..”
တရုတ်စကားတစ်လုံးစနှစ်လုံးစနားလည်သောမစိမ်းပြာသဘောပေါက်လိုက်သည် ။ ထိုဝန်ထမ်းလည်း မစိမ်းပြာပြောသောအင်္ဂလိပ်စကားကိုနားမလည်သလို ၊ မစိမ်းပြာ၏ ဘရုတ်သုတ်ခတရုတ်စကားကို ထိုလူနားမလည်မှာသေချာနေသဖြင့် “never mind , never mind ” ဟုတွင်တွင်ကြီးပြောကာ အသာလေးလစ်လာခဲ့ရသည်။ အလှကုန်တန်းကို စင်တစ်ဆင့်ချင်းသေချာလိုက်ကြည့်သောအခါ…ဟော တွေ့ပါပြီ မစိမ်းပြာလိုချင်တဲ့ fake eyelashes (မျက်တောင်တု) တွေ ။ မစိမ်းပြာမျက်တောင်တု ၀ယ်ချင်ရချင်းအကြောင်းအရင်းကလည်းဇာတ်လမ်းနဲ့ ။
မစိမ်းပြာ နယ်မှာနေစဉ်အခါက အလှသွားပြင်နေကျ မလင်းဆိုသော အခြောက်တစ်ယောက်ရှိသည် ။ မစိမ်းပြာအလှပြင်တယ်ဆိုလို့ ထူးထူးဆန်းဆန်းရယ်မဟုတ်ပါဘူး ။ အလှူမင်္ဂလာဆောင်တွေသွားရင် အခြောက်ဆီမှာအလှသွားပြင်လိုက် ၊ ဆံပင်လေးဘာလေးဖြောင့်ရုံပါပဲ ။ မစိမ်းပြာရဲ့နဂိုဆံပင်ဟာ ခပ်ဖျင်းဖျင်း နီကြောင်ကြောင်နဲ့ တော်တော်လေးရုပ်ဆိုးတဲ့ဆံပင်ပါ ။ မစိမ်းပြာတို့နယ်မှာ နေကလည်းပူ ၊ ဒီကြားထဲမစိမ်းပြာက ထီးတွေ ဦးထုပ်တွေဆောင်းရတာဝါသနာမပါသူမို့ နေပူခံပြီးအပြင်ထွက်တော့ မစိမ်းပြာခေါင်းကြီးဟာ ကြာလေနီလေ နဲ့ အုတ်သယ်တဲ့အလုပ်သမားလားလို့တောင် အနောက်ခံရတဲ့အထိပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ သူများတွေဆံပင်နီချင်လို့ အနီတွေဆိုးကြရတဲ့အထဲ မစိမ်းပြာခေါင်းက အော်ရဂျင်နယ် နီနေတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့သဘောခွေ့လို့ပေါ့ ။ တစ်ခါသား မစိမ်းပြာတို့အဘွား ရွာကနေ မစိမ်းပြာတို့ဆီကိုအလည်လာသည်။ မစိမ်းပြာအမေရောအဖေပါ အဖွားကိုကြောက်ရသူမို့ မြေးဖြစ်တဲ့မစိမ်းပြာတို့လည်းအာမခံဝံ့ ၊ စည်းကမ်းသေ၀ပ်တဲ့အဘွားလက်အောက်မှာ အားလုံးဟာ တသွေးတသံအမိန့်ပါပဲ ။ အလည်လာတဲ့အဘွားဟာ မစိမ်းပြာခေါင်းကိုမြင်တော့ ရင်ဘတ်ကိုတဒုန်းဒုန်းထုပြီး မစိမ်းပြာကိုဆူပါတော့သည်။ “စိမ်းပြာ…ညည်းခေါင်းကိုညည်းကြည့်လိုက်စိမ်း ဆီမထည့်ပျားမထည့် ၊ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးမှာ ဆံပင်၏ကောင်းခြင်းဆိုတာလည်းပါတယ်ဟဲ့..ဘယ်မှာလည်းညည်းဆံပင်…ပြောင်းဖူးမွှေးလိုနီကြန့်ကြန့်နဲ့အေ…လာငါနဲ့လိုက်ခဲ့….”
စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိတဲ့အဖွားဟာ မစိမ်းပြာကိုဆိုက်ကားနဲ့တင်သွားပြီး ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကိုခေါ်သွားကာ ခေါင်းတုံးတုံးပစ်လိုက်ပါတော့သည် ။
၁၈ နှစ်စွန်းစွန်းမစိမ်းပြာတစ်ယောက် ဂတုံးတုံးခံရလို့စိတ်ဆိုးလိုက်လေခြင်း ၊ မစားမသောက်မခေါ်မပြောဘဲနဲ့ အိမ်တွင်းအောင်းနေတာ အချိန်တော်တော်ကြာအောင် ။ ဒီကြားထဲ ဆံပင်သန်အောင်ဆိုပြီး ရွာကနေကြက်ဆူဆီလှမ်းမှာကာ မစိမ်းပြာကို ကိုယ်တိုင်လိမ်းပေးပါတော့သည် ။ ကြက်ဆူဆီတန်ခိုးလား ၊ ခေါင်းတုံးလိုက်တဲ့တန်ခိုးလားတော့မသိ.. မစိမ်းပြာရဲ့ဆံပင်တွေသန်လာလိုက်တာ မဲနက်စိမ်းလဲ့ပြီး အရမ်းသန်သည့်အပြင် အဆစ်အနေနဲ့ရလိုက်တာက ဆံပင်ကောက်ကြီးတွေဖြစ်သည် ။ မစိမ်းပြာရဲ့နဂိုညိုပျော့ပျော့ဆံပင်တွေအစား မဲမဲသန်သန်ကောက်ကောက်ကြီးတွေ ထွက်လာလိုက်ကြတာ..၀က်မွှေးတွေလိုကြမ်းရှရှမို့လို့စိတ်တွေညစ်လိုက်တာမှ မစားနိုင်မသောက်နိုင်အောင် ။ ထိုအချိန်ကနေစပြီး မလင်းဆီမှာ ခြောက်လတစ်ခါဆံပင်ဖြောင့်ပြီး ဆေးဆိုးတဲ့အကျင့်မစိမ်းပြာဆီကိုရောက်လာခဲ့သည်။ မလင်းသည်လည်းမစိမ်းပြာ၏လက်စွဲဖြစ်လာခဲ့သလို မစိမ်းပြာ၏ဆံပင်လေးတွေမှာလည်း ဖြောင့်ဖြောင့်စင်းစင်းနဲ့ အညိုရောင်လေးဘ၀ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည် ။ ကြက်ဆူဆီတန်ခိုးက ဘယ်လောက်ထိပြင်းလဲမသိ ။ ဖြောင့်ထားတဲ့ဆံပင်ညိုလေးတွေနဲ့ လှလှပပနေရတာသိပ်မကြာဘူး မဲမဲတူးတူး လိမ်လိမ်ကောက်ကောက်ဝက်မွှေးတွေ ဆံပင်ရင်းမှာပြန်ပေါ်လာတော့ မစိမ်းပြာတစ်ယောက်အလှပြင်ဆိုင်ကိုပြေးရပြန်သည် ။ ဒီလိုနဲ့ မလင်းဆီမှာ ဖြောင့်လိုက်ကောက်လိုက်နဲ့ သံသရာလည်နေလိုက်တာ မစိမ်းပြာ နိုင်ငံခြားမထွက်ခင်အချိန်ထိပါပဲ ။
မစိမ်းပြာဘွဲ့ယူခါနီးမှာမလင်းကပြောပြသည် ။ ဒီခေတ်မှာမျက်တောင်တုတွေခေတ်စားလာပြီပေါ့နော်။ ဘွဲ့ယူရင်မစိမ်းပြာကိုမျက်တောင်တုတပ် ဆိုပြီးအကြံပေးတာမို့ မစိမ်းပြာတစ်ယောက်လက်စွဲတော်မလင်းအကြံကိုလက်ခံလိုက်ပါတော့တယ် ။ မစိမ်းပြာတို့ရခိုင်သူတွေဟာ မျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်းကြတယ်လို့နာမည်ကြီးပေမယ့် မစိမ်းပြာကတော့ထိုစာရင်းထဲကိုမ၀င် ။ ဘယ်ဘက်ကနေအမွေရမှန်းမသိတဲ့ မှေးစိနေသောမျက်လုံးအစုံနဲ့ ပါးလျနေတဲ့ မျက်ခုံးမွှေး ၊ မျက်တောင်အပြင် နှာပြားလေးပါပိုင်ဆိုင်သောသူဖြစ်ပါသည် ။ မစိမ်းပြာက နဂိုအသားနည်းနည်းဖြူတော့ မျက်ပေမှေးလေးနဲ့ ကိုးရီးယားမလေးတွေလို မျက်တောင်တုတပ်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်လှမလဲဆိုပြီး မလင်းကမြှောက်ပေးတာမို့မစိမ်းပြာတစ်ယောက်မြောက်ကြွမြောက်ကြွနဲ့ဘွဲ့ယူမယ့်နေ့ကိုလက်ချိူးရေကာစောင့်နေပါတော့သည် ။ မလင်းပြောသလိုပဲ မစိမ်းပြာဟာ မျက်တောင်တုတပ်လိုက်တော့မထင်မှတ်လောက်အောင်ပဲ မျက်လုံးလေးတွေဝင့်ကာလှသွားတာမို့ မျက်တောင်တုတပ်ခြင်းကိုမစိမ်းပြာတစ်ယောက်တော်တော်လေးသဘောကျနှစ်သက်ခဲ့မိပါသည် ။ ဒါပေမယ့်လည်း အကြောင်းကြီးငယ်မရှိဘဲ အလှမပြင်ကြသော နယ်ဓလေ့အရ မစိမ်းပြာရဲ့မျက်တောင်တုအိပ်မက်ဟာလည်း စိတ်ကူးထဲမှာပဲပျောက်ကွယ်သွားတာ အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိပါပဲ။
အလှအပကိုမက်မောတဲ့မစိမ်းပြာတစ်ယောက် မမျှော်လင့်ဘဲရထားပေါ်မှာ မျက်တောင်တုတပ်ထားတဲ့စလုံးမ (စင်ကာပူသူ)တစ်ယောက်ကိုအတွေ့မှာ မျက်တောင်တုအိပ်မက်ကပြန်လည်နိုးထလာခဲ့ပြန်သည် ။ အင်တာနက်တွေ ၊ facebook တွေမှာ မျက်တောင်တုတပ်ကြတဲ့မင်းသမီးတွေတွေ့ပေမယ့် ကိုယ့်အလုပ်ကိုအားနာလို့ ကိုယ်နဲ့လားလားမျှမဆိုင်သလိုပဲနေခဲ့သည် ။ အမျိူးသမီးဆိုလို့မစိမ်းပြာတစ်ယောက်ပဲရှိသော အိုင်တီဌာနမှာ အ၀တ်အစားအနေအထိုင်ကအစ မစိမ်းပြာဆင်ခြင်တတ်တာမို့ လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ပြီးအလှလည်းပြင်ခဲသည် ။ ဒါပေမယ့် မျက်တောင်တုတပ်ထားသောမိန်းမတစ်ယောက်ကိုအရှင်လတ်လတ်မြင်ရတဲ့အခါမှာတော့မစိမ်းပြာစိတ်မထ်ိန်းနိုင်တော့ပေ ။ ရုံးမှာမတပ်လည်း အပြင်လေးဘာလေးထွက်ရင်တပ်တာပေါ့ ဘယ်သူ့ဂရုစိုက်လို့ ဆိုပြီး ရှောပင်းစင်တာထဲမှာမျက်တောင်တုသွားရှာခြင်းဖြစ်သည် ။ မျက်တောင်တုဘူးတွေထဲက မစိမ်းပြာသဘောကျသော ထူထူကော့ကော့ကြီးတစ်ခုရယ် ၊ သဘာဝကျမယ်ထင်ရတဲ့ခပ်ပါးပါးလေးတစ်ခုရယ် ၊ ကော်ဘူးတစ်ဘူးရယ်ဝယ်လာခဲ့သည် ။ မစိမ်းပြာစိတ်ထဲမှာလည်း မျက်တောင်တုကြီးတပ်လိုက်ရင် ဘွဲ့ယူတုန်းကလို မျက်လုံးဝင့်ဝင့်လေးပြန်ဖြစ်သွားမယ်လို့ယုံကြည်နေမိပါသည် ။
မနက်ဖြန်မှာရုံးမှာဒင်နာရှိတာမို့ မစိမ်းပြာတစ်ယောက် ဒီနေ့အိမ်မှာမျက်တောင်တုတပ်ခြင်းကိုအပီလေ့ကျင့်နေမိသည် ။ ဟုတ်တယ်လေ ဒါမှပဲ ဒင်နာကျရင် လှလှပပလေးသွားရမှာကိုး ။ youtube ဖွင့်ပြီးတပ်နည်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲလုပ်ကြည့်နေမိသည် ။ မစိမ်းပြာက ကိုယ့်ဇကိုလည်းယုံတာကိုး ။ အလှအပနဲ့ပက်သက်လျင် လက်ရဲဇက်ရဲနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တတ်တတ်မတတ်တတ်လုပ်ရင်းအဆင်ပြေသွားတတ်တဲ့ ရာဇ၀င်ရှိတာမို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ယုံကြည်မှုလည်းအပြည့်ရှိသည်။ google လုပ်ထားသည့်နည်းအရဆိုလျင် မျက်တောင်တုကို ကိုယ့်မျက်စိနဲ့သင့်တော်မည့်အရွယ်အစားအတိုင်းဘေးနှစ်ဖက်ကိုညှပ်ပေးရမည်ဆိုသောကြောင့် မစိမ်းပြာလည်းမျက်တောင်တုဘေးနှစ်ကိုညှပ်ပစ်လိုက်သည် ။ ကော်ကပ်ပြီး ခဏလေးထားရမည်ဆိုသောကြောင့်ခဏလေးထားကာ မျက်တောင်တုကိုစကပ်လိုက်သည် ။ မစိမ်းပြာရဲ့မျက်လုံးဟာ ခပ်စင်းစင်းဖြစ်ရသည့်ကြားထဲစတပ်ခါစဆိုတော့ အဆင်မပြေ ။ ဘယ်ဘက်ကကပ်လိုက်လျင် ညာဘက်က ထောင်သွားသည်။ ညာဘက်ကိုကပ်လိုက်လျင်ဘယ်ဘက်ကပြန်ကွာပြီးထောင်သွားသည် ။ နှစ်ဘက်လုံးစိတ်ရှည်လက်ရှည်ကပ်လို့ရသွားတဲ့အခါ မျက်လုံးထက်မျက်တောင်တုက ပိုခုံးသွားပြီး မျက်လုံးက အောက်မှာကျန်ခဲ့လေသည်။ မစိမ်းပြာကလည်းလှဖို့ပဖို့ဆိုလျင်စိတ်ရှည်သည့်အမျိူးလေ မရရအောင်ကပ်သောအခါ နောက်ဆုံးတော့ မျက်တောင်နှစ်ဘက်စလုံးကပ်၍ရသွားသည် ။ မျက်တောင်ကပ်လို့ရတော့ လှမလှ အဝေးကနေပြီးကြည့်လိုက် အနီးကပ်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့အားမရဘဲ မစိမ်းပြာတစ်ယောက် ယောက်ယက်ခတ်ပြီးသူငယ်ချင်းတွေဆီကိုဓာတ်ပုံပို့လိုက်သေးသည် ။ မစိမ်းပြာသူငယ်ချင်းတွေကတော့ လှတယ်ဆိုပြီး ကောင်းချီးသြဘာပေးကြပေမယ့် မကျေနပ်နိုင် ။ မလင်းလုပ်ပေးသလိုသဘာဝကျကျမလှတော့ ဥာဏ်ကူရပြန်သည် ။ မရှိသည့်မျက်ရစ်မှာ လိုင်နာအမည်းတွေချယ်ပြီး လိုတာလေးတွေဖြည့်လိုက်တော့ မစိမ်းပြာမျက်လုံးလေးက သမင်မျက်လုံးလေးတွေလို ၀င့်ဝင့်ပြုးပြူးကလေးဖြစ်သွားသည် ။ မစိမ်းပြာတစ်ယောက်ဝမ်းသာပီတီဂွမ်းဆီထိပြီးတော့ အကြိမ်ကြိမ်လေ့ကျင့်ပြီး အောင်အောင်မြင်မြင်တပ်တတ်သွားပြီမို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြည်နူးမဆုံးရှိတော့လေသည်။
မစိမ်းပြာက အနက်ကြိုက်သူမို့ အနက်ရောင်ကိုယ်ကျပ်ဂါဝန်တိုလေးဝတ်ပြီး ဆလင်းဘက် အနက်ကလေးနဲ့ ရှုးအနက်ကလေးနဲ့ ဒီကြားထဲ မျက်တောင်တုလေးကလည်းတပ်ထားတယ်…နှုတ်ခမ်းနီလေးနဲ့ဆိုတော့ ပြင်သစ်မော်ဒယ်လေးလိုပဲနေမလား ကိုးရီးယားမလေးလိုလှနေမလား မသိ..တွက်ရေးကစက်သူဌေးပဲဆိုပါတော့ ။
မျက်နှာကိုအလှဆုံးပြင်ပြီး လိုင်နာတွေခြယ် ၊ မျက်တောင်တုလေးတပ်ဖို့ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ပါတော့တယ် ။ မနေ့ကအကြိမ်ကြိမ်လေ့ကျင့်ထားပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့အဆင်မချောချင် ။ ရှုးအနက်မရှိလို့ တစ်နေကုန်ရှုးလိုက်ရှာရင်း ဘာမှမယ်မယ်ရရမစားရသေးတော့လက်တွေကတုန်ချင်ချင် ။ လက်ကသိပ်မမြဲချင်တော့ မျက်တောင်တုကိုကော်ကပ်သည့်အခါ လိုတာထက်ပိုသွားခဲ့သည်။ procedure အရ ခဏထားပြီးမျက်တောင်တုကိုတပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ လိုတာထက်ပိုသွားတဲ့ကော်တွေက တုန်နေသောလက်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် ဗြိခနဲ မျက်စိထောင့်ကိုဝင်သွားပါတော့သည် ။ ဒါပေမယ့်လည်းမစိမ်းပြာပဲလေ..အပူရုပ်ဟန်လုပ်…အဲ ဟုတ်ပါဘူး မျက်လုံးကို
wet tissue နဲ့အသာလေးသုတ်ပြီး အလှပြင်မပျက် ။ procedure အရ လိုင်နာတွေထပ်ဖြည့် လိုတာလေးတွေပြင်ပြီးတော့ မှန်ကိုအပြောင်းအပြန် အခါငါးဆယ်လောက်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိပ်ကျေနပ်နေမိတော့သည် ။ ဒင်နာမသွားခင် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မှန်ကိုအနီးကပ်သေချာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန် မစိမ်းပြာရဲ့ဘယ်ဘက်မျက်စိထောင့်က နီရဲနေသည့်အပြင် ကော်ဝင်သွားတဲ့အတွက် မျက်ရည်တွေပါ တစိမ့်စိမ့်ထွက်လို့ ။ လှချင်လွန်းတဲ့မစိမ်းပြာတစ်ယောက် မျက်ရည်လေးတစမ်းစမ်းနဲ့ ဒင်နာလာရသည့်အဖြစ်ရယ်လေ..။
ထူးထူးခြားခြားအလှပြင်လာသော မစိမ်းပြာကို လူတိုင်းက လှတယ်လှတယ်နဲ့ မစိမ်းပြာကတော့ မျက်ရည်လေးတစမ်းစမ်းနဲ့ကျေနပ်လို့ပေါ့ ။ မျက်တောင်တုစတပ်ပြီးတည်းကစိမ့်ထွက်လာသည့်မျက်ရည်ဟာ ဒင်နာအချိန်တစ်ဝက်ကျိုးတဲ့အထိ ထွက်လို့မကုန်သေးဘူး ။ မစိမ်းပြာခမျာ မျက်ရည်လေးတစမ်းစမ်းနဲ့ ဟိုလူ့ရယ်ပြ ၊ ဒီလူရယ်ပြနဲ့ ။ မစိမ်းပြာရဲ့အဖြစ်ကိုသတိထားမိနေတဲ့ တခြားဌာနက မန်နေဂျာမမ က မစိမ်းပြာဆီကိုပေါက်ချလာပြီး ဘာဖြစ်လဲလို့မေးလာတော့ မစိမ်းပြာခမျာရယ်ရခက်ငိုရခက်နဲ့ ကော်ဝင်သွားလုိ့ဆိုပြီးရှင်းပြရပါတော့သည် ။ စေတနာကောင်းလွန်းတဲ့ မန်နေဂျာမက မစိမ်းပြာကို သူ့မှာ eyes drop ပါတဲ့အတွက်ထည့်ပေးမယ်လို့ပြောတော့ မစိမ်းပြာကလည်းအားနာပါနာနဲ့လက်ခံလိုက်ရသည်။ မီးတွေထိန်ထိန်လင်းနေသော ကောင်တာနားကို မစိမ်းပြာကိုခေါ်သွားပြီး eyes drop ထည့်ဖို့ မျက်နှာလေးကိုအမော့…မန်နေဂျာမရဲ့ ခွိခနဲရယ်သံကိုအရင်ဆုံးကြားလိုက်ရသည် ။ မစိမ်းပြာလည်းကြောင်ပြီးကြည့်နေတော့ မန်နေဂျာမမက
“မစိမ်းပြာ နင့်မျက်တောင်တုက တစ်ဝက်ကြီးတဲ့..”
“နင်က အစွန်းနှစ်ဘက်လုံးကိုအများကြီးညှပ်ပစ်လိုက်တော့ နင့်မျက်တောင်တုက အလယ်သားလေးတွေပဲကျန်တော့တယ်လေ..ဘေးဘက်က အတိုလေးတွေမရှိတော့ နင့်မျက်တောင်တုက ရှည်ရှည်စင်းစင်းကြီးတွေပဲကျန်တာနေမှာ..”
မန်နေဂျာမမပြောလည်းပြောချင်စရာပဲ မစိမ်းပြာရဲ့မျက်တောင်တုက ရှည်ရှည်ပြားပြားကြီး ဒီကြားထဲ မစိမ်းပြာက မျက်ထောင့်လေးကနေစပြီးတပ်ထားတော့ မျက်စိတစ်ဝက်လောက်မှာပဲ မျက်တောင်တုရှိပြီး ကျန်တစ်ဝက်က ဟာလာဟင်းလင်း ။ မျက်တောင်တုရှိနေတဲ့မျက်စိတစ်ဝက်ကလည်း ရှည်ရှည်ညီညီကြီးတွေ ။ ဘယ်လောက်များရယ်စရာကောင်းနေမလဲမသိ ။ marketing က မိန်းမတွေကလည်း ပြုံးစိစိနဲ့ကြည့်လို့ မစိမ်းပြာတစ်ယောက်ရှက်စိတ်နဲ့ ဒင်နာကနေပြေးပြီးပြန်သွားချင်တော့သည် ။ လိုင်နာတွေ ၊ ကော်တွေထည့်ထားသော မျက်တောင်ကဆွဲဖြုတ်ဖို့လည်းအဆင်မပြေ ၊ တပ်ထားဖို့ကလည်း တ၀က်တပျက်နဲ့ ။ ရှက်စိတ်ကြောင့်လားမသိ ကော်ဝင်နေတဲ့မျက်စိက ပိုပြီးမျက်ရည်တွေယိုလာပါတော့သည် ။ မျက်ရည်တွေကစိမ့်ထွက်လာတော့ ခြယ်ထားတဲ့လိုင်နာတွေကအရည်ပျော် ၊ အရည်ပျော်တော့ သုတ် ၊ သုတ်တော့ မျက်ရည်ကပိုစိမ့်နဲ့ မစိမ်းပြာတစ်ယောက် တစ်ခုသောဒင်နာမှာမျက်တောင်တုတစ်ဝက်နဲ့ မျက်ရည်လေးတစမ်းစမ်းနဲ့ wet tissue လေးနဲ့သုတ်ရင်း မစားနိုင်မသောက်နိုဘဲ ဒင်နာချိန်မြန်မြန်ပြီးပါစေသာ ဆုတောင်းရင်း ။ ။
Filed Under: ၀တ္တုတို, မစိမ်းပြာ
18 thoughts on “မစိမ်းပြာနှင့် မျက်တောင်တု”
Han Kyi says:
မိန်းကလေးမဖြစ်တာ ကံကောင်းလိုက်လေခြင်း…သူရို့ခမျာ ဟိုဒင်းအတုတပ်ရ ဟိုဟာအတု စွတ်ရနဲ့ ဒုက္ခများရန်ကော…ပို့စ်ဖတ်ရင်း ရယ်လည်းရယ်ချင်…သနားလည်းသနားနဲ့ ပို့စ်ကောင်းတစ်ပုဒ်ပဲလို့ ကောက်ချက်ချမိပါသဗျား…
ကျေးဇူးပါဦးဟန်ကြည်ရယ်..မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်ကရိကထဘယ်လောက်များလဲဆိုတာတော့ မေးမနေပါနဲ့တော့… မစိမ်းပြာဆီးရီးလေးတွေဆက်ရေးဦးမှာမို့ အားပေးပါဦးနော် ။
ညီမရေ ရေးဟန်သွက်သွက်လေးကို သဘောကျမိတယ်. မစိမ်းပြာကို ရှေ့ ကထိုင်ကြည့်နေရသလို သရုပ်ဖော်ပီပြင်လွန်းလှတယ်.
ကျေးဇူးပါ မတန်ခူးရယ်း) အမြဲလာဖတ်ပေးတဲ့အတွက်ကော သရုပ်ဖော်ပီတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်း) <3
ဖတ်နေရင်း ခွိကနဲ အသံထွက်သွားတယ်.. ဆုမြတ်ရယ် .
ဟီးးး ခွိရုံပဲလား.း) ကျေးဇူးပါစင်စင်ရယ်
ရီလိုက်ရတာအူကိုတက်လို့ ဟီးဟီးးးး xDDD
ကျေးဇူးပါ ဆူဇီလေးရယ်း)
August 21, 2013 at 3:54 am
ဆုမြတ်ရေ ဖတ်လို့ တကယ်ကောင်းတယ်။မလေးတော့ မျက်တောင်တု တပ်ရဲတော့ဘူး။ ဟီးဟီး ။
မလေးရယ်..မျက်တောင်တုက လှတော့လှပါရဲ့….. အန္တရယ်သိပ်များတာလေး) အမြဲတမ်းလာလည်တာကျေးဇူးပါမလေး
Adora etc. says:
ဖတ်ရင်းနဲ့ ရီလိုက်ရတာ မဆုမြတ်ရယ်။ မနက်စောစော အလုပ်မှာငိုက်နေတာ။ ခုတော်တော် လန်းဆန်းသွားပြီ။
Adora လဲဖြစ်ဘူးတယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင်တော့ဟုတ်ဘူး သူငယ်ချင်းကို ဆရာကြီးလုပ်ပြီး တပ်ပေးတာ။ ပြီးသွားတော့ သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ် မျက်တောင်နဲ့ အတုကြားမှာ တော်တော်ကြီးကွာနေတာပါကလား။ mascara တွေနဲ့ အတင်းပေါင်းပြီး ကော့လဲမရတာနဲ့ နောက်ဆုံးဆွဲခွါလိုက်ရတယ်။ သူငယ်ချင်းလဲ မျတ်ရည်တစမ်းစမ်းနဲ့ပဲ။ အဟီး
ကျေးဇူးပါ မ adora ရယ်း) မျက်တောင်တုကလေ…လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်..။ လုပ်တတ်ရင်တော့အသာလေးပဲ ။ ဆုမြတ်အ၇င်နေတဲ့အိမ်ကအမကြီးဆိုရင်မျက်တောင်တုတပ်တာ တစ်မိနစ်တောင်မကြာဘူး ။ ဆ၇ာကျချက်…ပထမဆုံးအကြိမ်လာလည်တဲ့အတွက်ကော…လင့်ချိတ်ထားတဲ့အတွက်ပါကျေးဇူးပါရှင့် ။ ဆုမြတ်လင့်ခ် update လုပ်ရင်ချိတ်ပါဦးမယ်နော် ။
မစိမ်းပြာကတော့ခပ်လွဲလွဲပဲ ပစ်ပစ်ရယ်း) ကော့မက်ချန်တာကျေးဇူးပါလို့
ဆုမြတ်ကနှာခေါင်းကပြားရုံလေးပဲ။အသူဆို.နှာခေါင်းကပြားရုံတင်မကဘူး။ပွတောင်ပွချင်နေသားလို့ ခွိခွိ။ 😛
Archives Select Month November 2019 (1) October 2019 (1) February 2019 (1) January 2019 (3) December 2018 (5) August 2018 (1) January 2018 (1) December 2017 (1) November 2017 (4) October 2017 (2) September 2017 (3) August 2017 (5) July 2017 (1) June 2017 (1) May 2017 (4) April 2017 (3) March 2017 (1) December 2016 (2) November 2016 (2) June 2016 (3) February 2015 (2) December 2014 (1) November 2014 (1) October 2014 (2) September 2014 (3) October 2013 (1) September 2013 (2) August 2013 (2) July 2013 (6) June 2013 (6) May 2013 (25) April 2013 (2)
Categories Select Category ၀တ္တုတို (13) 20 Facts (3) bulletin board (4) tag (3) Women’s World Journal (5) ကဗျာ (28) ခရီးသွားမှတ်တမ်း (16) ချစ်သူအတွက် (3) စာအုပ် (1) စိတ်ထဲရှိသမျှ (18) ထိုသောကြာ (2) ဘာသာပြန် (1) မစိမ်းပြာ (1) ဟိုလိုလို ဒီလိုလို (10) အမှတ်တရများ (16) အတွေးတစ်စ (17) မောင်လေး (2) ရွှေဒေါင်းတောင် (2) ကြုံရဆုံရ (6)
Copyright © 2018-2020 by HSUMYATMOE.COM